Samsung ayaa ku guuleysatay $ 120 Milyan oo racfaan ah Apple | Wararka IPhone
Samsung ayaa ku guuleysatay $ 120 milyan oo racfaan ah oo ka dhan ah Apple
Apple iyo Samsung waxay ku lug lahaayeen dacwado sharciyeed muddo dhowr sano ah. Xukun kasta oo aan fiicnayn oo loogu talagalay dadka Kuuriya, Samsung badanaa waxay ka codsaneysaa inay dib u soo gudbiso xog dheeri ah si ay isugu daydo inay caddeyso in xukunka lagu xukumay uusan sax ahayn. Dacwadda Apple ee ka dhanka ah Samsung ee ku aaddan adeegsiga "xiriiriyeyaasha deg-degga ah" ee loo yaqaan patent-ka oo ay la socdaan laba qof oo kale, oo shirkadda Kuuriya lagu amray inay bixiso 120 milyan oo doolar maxkamadda rafcaanka ayaa qabtey in Samsung aysan ku xadgudbin wax shatiyeed intaas ka dib, markaa isagu ma bixin doono 120 milyan oo doollar oo lagu xukumay.Maxkamadda Racfaanka Mareykanka ee Gobolka Washington DC waxay caddeyneysaa taas Samsung Elecctronics Co Ltd kuma xadgudbin rukhsadda "xiriiriyeyaasha degdegga ah" ee Apple oo ay weheliso bog-u-furid iyo otomaatig sax ah., sidaa darteed xukunkii hore waa la buriyay ugu dambayntiina dadka Kuuriya ma bixin doonaan ganaaxa ay maxkamaddu ku soo rogtay.
Isla warbixintaas, oo ay daabacday Reuters, maxkamaddu waxay ku xukuntay Apple adeegsiga aaladda Samsung, laakiin xilligan faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta lama hayo. Tani waa guul weyn oo Samsung u soo hoyatay dagaal dhanka sharciga ah oo socday dhowr sano, laakiin ma noqon doono dhamaadka dacwadaha u dhexeeya labada shirkadood.
Labada shirkadoodba wali waxay leeyihiin dacwado badan oo la xareeyay, kuwaas oo asal ahaan labadaba ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen shatiyado ay horay u diiwaan galisay shirkada kale. Waqtigaan la joogo, mid ka mid ah dalabyada soo jiitay dareenka ugu badan, ee ah kala-bax-ka-furid, waxaa ku guuleystay shirkadda Samsung. Dacwaddani waxay ka mid ahayd kuwii ugu horreeyay ee ay labada shirkadood la kulmaan oo ay weheliso tii ay Apple soo bandhigtay markii Samsung ay soo saartay noocii ugu horreeyay ee Galaxay, kaasoo ugu dambayntii Kuuriya laga adkaaday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung ayaa ku guuleysatay $ 120 milyan oo racfaan ah oo ka dhan ah Apple
Yaan ku xadgudbin wax shatiyeed? Kaalay, waxa dhacaya ayaa ah inay qabow yihiin maxaa yeelay ma aysan furin taleefanka argagixisada iyo "ma ahan Mareykan wanaagsan" maxaa yeelay iyagu uma adeegaan dalkooda.
Kan oo kale, qaar badan ayaa Apple ka sugaya iska indha tirka bahalladaas.
Qaybo cusub ayaa imanaya tvOS App Store. Hadda waa la abaabulay!